Maitiro ekuona iPad paTV | Nhau dze iPhone
Ignatius Room | 17/04/2022 12:00 | iPad, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Chokwadi pane kanopfuura chiitiko chimwe chawakafunga nzira yekuona ipad patv kuti unakirwe nezviri mumudziyo wako pane yakakura skrini. Kuona iyo iPad paterevhizheni kwakanakira kunakidzwa nemitambo yedu yatinofarira uchishandisa a Kudzora kuraira.
Zvinonyanya kubatsira pakuona mapikicha nemavhidhiyo zvatakachengeta pamudziyo wedu, kuona mavhidhiyo kubva kuYouTube, kutepfenyura mavhidhiyo mapuratifomu... hongu TV yedu haina kungwara sezvatinoda.
Kuona iyo iPad paterevhizheni tine sarudzo mbiri:
1.1 mheni kune hdmi tambo
1.2 USB-C kuenda kuHDMI tambo
2.2 AirPlay-inogonesa smart TVs
3 Tumira zvirimo kuburikidza neAirPlay kuterevhizheni
3.1 Wona iPad app paTV ine AirPlay
3.2 Wona vhidhiyo yePad paTV ine AirPlay
Kushandisa tambo kuona iPad paterevhizheni ndiyo nzira iri nyore uye, nekuwedzera, kuderedza latency kusvika zero. Kana iwe uchida kunakidzwa nemitambo yako yaunofarira paTV pasina chero latency (chiratidzo kunonoka), kushandisa tambo ndiyo yakanyanya mhinduro.
Zvichienderana neiyo iPad modhi, isu tichada a mheni kana USB-C kuenda kuHDMI tambo.
mheni kune hdmi tambo
Kana mudziyo wako uine chinongedzo chemheni, unoda mheni kune hdmi tambo, tambo yatinogona kutenga zvese muApple Store uye mukati Amazon kwemadhora asingasviki mazana maviri emadhora.
Dambudziko netambo dzeAmazon nderekuti vamwe vagadziri, vanoti tambo inosimbiswa neApple (MFI seal), kunyange zvazvo zvisiri zvechokwadi.
Kana iyo isina kusimbiswa zviri pamutemo neApple (zvakaoma kutaura), adapta inogona kushanda pakutanga, asi nekufamba kwenguva, zvichida icharega kushanda.
Usati wasarudza tambo imwe kana imwe, zvinokurudzirwa kuverenga wongororo yemushandisi. O zvakanaka, kubhadhara kupfuura 50 euros kuti iyo yepamutemo tambo inodhura muApple Store.
Kana tangobatanidza iyo iPad kuterevhizheni tichishandisa mheni kune HDMI tambo, iyo chifananidzo chinobva kuPad ​​chinozotanga kuratidzwa pachiratidziro cheterevhizheni, pasina isu kuita chero zvigadziriso kune iPad.
Newaya iyi, girazi ipad skrini kune tv. Kana tikadzima skrini, kutepfenyura kunomira.
USB-C kuenda kuHDMI tambo
Kana iPad yako ichisanganisira USB-C port, unoda USB-C tambo. USB-C kune HDMI. Kusiyana netambo dzemheni, unogona kushandisa chero tambo iripo, sezvo iri chiyero, haidi chero mhando yechitupa.
Ehe, usasarudza mhinduro yakachipa kana iwe uchida kunakidzwa nezviri kubva kuPad ​​yako mune yakanakisa mhando uye kuti, nekufamba kwenguva, iyo USB-C chikamu haina kukuvara, sezvo iri iyo yakanyanya yatichabata kuibatanidza kune mudziyo wedu.
Kana tangobatanidza iyo iPad kune terevhizheni tichishandisa USB-C kune HDMI tambo, iyo iPad mufananidzo unozoratidzwa otomatiki paTV pasina isu kuita chero zvigadziriso kune iPad.
Sezvakangoita kana tikashandisa mheni kune HDMI tambo, kana tikadzima skrini, nhepfenyuro inomira, saka haina kunaka pakudya zvemukati kubva kutenderera vhidhiyo mapuratifomu.
Nzira yacho yakawanda nyore uye nyore kuona iPad paTV iri kushandisa Apple's AirPlay tekinoroji.
Ne AirPlay, tinogona kutevedzera chidzitiro chemudziyo wedu (kuchengeta skrini) kana tumira zvirimo mufomati yevhidhiyo kutamba zvirimo nekudzima skrini yemudziyo wedu.
Kunyangwe AirPlay iri tekinoroji yeApple, mumakore achangopfuura yatanga kuipa rezinesi kuitira kuti vamwe vagadziri vagone kuishandisa mune smart TVs.
Kana tichida kushandisa AirPlay tine 3 sarudzo:
AirPlay-inogonesa smart TVs
Iyo yakanakisa mudziyo kunakidzwa neAirPlay mashandiro iApple TV, iyo Apple mudziyo uyo inoshanda seHomeKit hub uye izvo, mukuwedzera, zvinotibvumira kunakidzwa chero kushambadzira vhidhiyo chikuva
Kuve yekubatanidza isina waya, isu tichagara tichiwana imwe latency kana tichida kutevedzera chidzitiro paterevhizheni, saka hazvina kunaka kunakidzwa nemitambo uko chero mhando yekunonoka inogona kukanganisa mutambo wemutambo kana ruzivo rwemushandisi.
Iyo yakachipa Apple TV iyo Apple parizvino inopa pamusika ndiyo HD modhi Iyo ine mutengo we159 euros uye ine 32 GB yekuchengetedza.
Kana iwe uchida Nakidzwa nemavhidhiyo e4K kuburikidza nekushambadzira unofanira kubhadhara 199 euros iyo inodhura yakachipa modhi, modhi inowanikwawo mushanduro ine 32 uye 64 GB yekuchengetedza.
Samsung, LG y Sony kupa mumhando yepamusoro-soro, tsigiro yeAirPlay. Nenzira iyi, tinogona kushandisa basa guru reApple TV pasina kuitenga.
Kana uri kufunga kumutsiridza terevhizheni yako yekare uye uchida kuti ikupe makore mashoma, unofanira sarudza modhi inopa rutsigiro kune iyi tekinoroji.
Iyo yakachipa sarudzo yeavo vese vatinokuratidza muchikamu chino kuti ugone kunakidzwa neAirPlay kuona iyo iPad paterevhizheni kutenga imwe yakasiyana. Amazon Fire TV mhando.
Uye ini ndinoti zvakachipa, nekuti iyo yakachipa modhi yeAmazon's Fire TV zvishandiso ndiyo Fire TV Stik Lite, iyo inodhura 29,99 euros, kunyange dzimwe nguva tichigona kuiwana ne kuderedzwa kwe10 euros pamutengo wayo wenguva dzose.
Natively, Fire TVs hazvienderani neAirPlay, asi, tinogona kuwedzera kugarisana neiyi protocol uchishandisa application airscreen, app inowanikwa mahara muAmazon Fire TV app store.
Tumira zvirimo kuburikidza neAirPlay kuterevhizheni
Hazvina kufanana tumira chifananidzo kubva kuPadad kuenda kuterevhizheni pane kutumira zvirimo zvevhidhiyo inoyerera papuratifomu kuterevhizheni.
Pakutumira mufananidzo kubva kuPad ​​kuenda kuTV, isu tiri kuratidza skrini, saka tikaidzima, kutamba kunomira.
Asi, kana isu tikatumira mufananidzo kubva pakushambadzira vhidhiyo papuratifomu kana application yekutamba mavhidhiyo, tinogona kudzima iPad chidzitiro uku kutamba kuchienderera mberi.
Wona iPad app paTV ine AirPlay
Isu tinovhura iko kunyorera mutambo kana app zvatinoda kuratidza paterevhizheni yedu.
Isu tinopinda control pan nekutsvaira kubva kumusoro kurudyi kwekrini.
Tevere, tinodzvanya pane mahwindo maviri akapetana.
Pakupedzisira, tinosarudza zita remudziyo umo tinoda kuratidza mufananidzo.
Rangarira, kana ukadzima skrini, girazi regirazi rinomira.
Wona vhidhiyo yePad paTV ine AirPlay
Isu tinovhura vhidhiyo inoridza kana kutenderera vhidhiyo chikuva kwatinozotumira zvirimo kuburikidza neAirPlay.
Tinotanga kutamba zviri mukati uye tinya pachikwere chine katatu muchimiro chemafungu (iyi icon inogona kuoneka chero kupi pachiratidziri)
Ipapo a nyora nemidziyo yese inoenderana neAirPlay.
Isu tinosarudza mudziyo kwatinoda kuona zviri mukati.
Kana kutamba kwatanga, tinogona kudzima chidzitiro che iPad yedu pasina kumisa kutamba kwevhidhiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuona iyo iPad paTV